Qelasy, iyo piritsi yekudzidzira inogadzirwa muIvory Coast - Afrikhepri Fondation
Qelasy, iyo piritsi rekudzidzisa rakagadzirwa muIvory Coast
Qelasy zvinoreva "kirasi" mumutauro weAkan. The tablet ichava nechinangwa kumusangano wekudzidzisa. Iyo ipiritsi yekudzidzisa iyo ichapa software uye zvigadzirwa zvevadzidzi. Zvinyorwa-zvinyorwa zvechikoro zve nyika imwe neimwe iyo tablet ichawanikwa. Ikopa racho richavawo nemashandiro ezuva nezuva ekutarisa uye kuongorora kwevadzidzi. Izvi zvinobvumira kushandiswa mukirasi yevadzidzisi, vadzidzi nevabereki.
Sezvo muumbi we Qelasy, Thierry N'Douffou, piritsi racho haringatsivi vadzidzisi, asi richava rutsigiro rwekusimbisa. ari tablet tablet Qelasy saka ichatendera vabereki kuti vatevedze mamaki evana vavo. Ichashandawo sekabhuku kekunyorerana uye mushumo kadhi.
Inyanzvi dzehutano hweQelasy tablet inotevera
- Masisitimu Anoshanda: Android 4.2 - Screen: 8 inches - processor: Quad-core ye1 Ghz - Yemukati ndangariro: 16 GB - Kurema: 480 gramu - Kuzvidzivirira: 8 maawa - Mutengo wekutanga: 270 euros kana 180 000 Fcfa
Purogiramu yekudzidzisa Qelasy ichange ichidzivirira kumvura uye guruva. Vana vaduku vachakwanisa kuva nethetheni yavo pose pose uye mumamiriro ezvinhu ose.
The tablet Qelasy ichave ichiwanikwa muzvinyorwa zvitatu: - "Mwana" wevadiki vane kodhi yevabereki - "Teen" yevechiri kuyaruka - "Uni" yevadzidzi
Chimwe nechimwe chetabhenakeri yekudzidzira ichava software dzakananga. Mukuwedzera, mukana wekuwana mamwe mabasa uchabvumirwa, uyewo Qelasy ichava neshanduro yekuzvitsaurira yakatsaurirwa.
Zvinhu zvakasiyana-siyana zvinogadzira Qelasy, imwe piritsi. Izvi ndezvevamwe
• Qelasy bhegi aya akachinjazve pakuva kugutsikana chikoro kubvumira mudzidzi kuenda kirasi yose ake nemabasa, mabhuku ake, uye zvimwe zvinhu dzidzo pasina kuva kutakura mukwende 15 makirogiramu asi zvishoma pane 500 g.
• NaKelasy, vabereki nevadzidzisi vane simba. Vanosarudza kuti zvii zvidzidzo mudzidzi anogona kuwana, nguva iyo mudzidzi anogona kushandisa Qelasy yake uye kuti kana kwete kubvumira kuwanikwa paInternet uye mamwe mawebsite. Mubereki naKelasy anokwanisa kutevera manotsi emudzidzi chero nguva kubva pakombiyuta yake kana paTelesy tablet uye achisangana nevadzidzisi.
• Zvikoro uye vadzidzisi vane nzira yekubudisa zvidzidzo zvezvidzidzo uye shanduro yechirongwa nevabereki.
• Qelasy haina mvura, inopesana nemamiriro ekunze akaipa uye guruva, vabereki vanogona kusimbiswa, kunyange kana pakaitika mvura, mabhuku uye mabhuku evanodzidza vanochengeterwa. Kana inorema soiling pamusoro piritsi, zvinogona kucheneswa nemvura pasina ngozi, uye zvakawanda Qelasy ane akanaka bhatiri upenyu kubvumira ndichibvunza kushandisa panguva zuva pasina ngozi kutsakatika.
• Qelasy yakachengeteka, kuwanika kunoenderana nekugadziriswa kusarudzwa. Qelasy chete inogona kushandiswa kune zvibvumirano zvakapiwa. Uyezve, Qelasy inoda kushandiswa kwehutari yekare kushandura piritsi kune mudzidzi.
• Qelasy isirivha yechikoro, kwete pombi yepaseti. Iyo inobvumira kuwanika mabhuku edijitori uye mabhuku, zvakagadzirirwa ne multimedia uye zvinyorwa zvinopindirana, zvine zvayo shandisi yekushanda uye mabhuku anongopa mabhuku, zvidzidzo uye mitambo yezvidzidzo
• Qelasy isati yakabatana, inobvumira 3G kupinda muInternet. Inokubvumirawo kuti utone uye kutumira mameseji, vose vari pasi pekutonga kwakanaka kwechikoro kana mubereki. Nokudaro, inobvumira vashandi kupa zvikwata zvekudzidzisa kubatanidza izwi, uye data yekuwana dzidzo nehupenyu hwekufamba.
Qelasy haisi tafura chete asi mhinduro yakasanganiswa inopa zvikoro nemasangano chikuva chekutarisira chikoro, manejimendi-mudzidzisi manejimendi manejimendi uye manejimendi manejimendi. Muzvikoro, inovimba netiweki yemuno kusundira zvirimo pamapiritsi. Anovimba neinternet kuchinjana nevabereki
• Qelasy zvakare inzvimbo yekuchengetedza vashandi pamwe chete kana muparidzi wehuwandu uye zvidzidzo zvekudzidzisa.
Verenga chinyorwa chizere
Zvimwe zvinyorwa muchikamu
Iyo yechokwadi nyaya yezvakagadzirwa
Samuel Kountz anobudirira mukuisirwa kweitsvo uye nekuchengetedza kwenguva refu kweitsvo
Mangwana - Documentary (2015)
Evhangeri Isinganzwisisike yaBhanabhasi, Ndiro Bhaibheri Rakanganisa - Zvinyorwa (2015)
Kushanda hupenyu uye kushaya hope
Tinouya Seshamwari - Nyorwa (2015)
Kana iwe waifarira iyo saiti, ndapota igovana nayo neshamwari dzako kana mhuri!